CNC fikosoham-bary Service
CNC Nanova Service
Casting maty Service
CNC fikosoham-bary Parts
CNC Nanova Parts
Casting maty Parts
Anebon metaly vokatra Co., LTD
Anebon naorina tamin'ny 2010 ny ekipa dia manokana eo amin'ny famolavolana, famokarana ary ny varotra ao amin'ny orinasa fitaovana. Ary efa tafafindra ISO 9001: 2015 fanamarinana.
Efa mandroso, mahomby sy ambony izany fitsipika izany milina avy any Japon, isan-karazany ao anatin'izany ny CNC nitotoana azy, ary nitodika milina, ambonin'ny grinder, anatiny sy tsotra grinder, WEDM-Hs / LS, tamin'ny laser lehibe fanapahana milina ect. Ary isika koa dia manana ny tena mandroso fitaovana fitiliana (CMM 3D Coordinate Fametrahana Ireo Machine, CCD Optical detector tratra sns) Parts amin'ny tolerances miakatra ± 0.002mm azo tohanana.
Maherin'ny 10 taona fametrahana mazava Engineering Experience:
Manovaova avo no tombony, mahia fanamboarana no fitsipika, fahafaham-po ny mpanjifa no nanenjika, hahazo fandresena fandresena-toe-javatra no tanjontsika. Taorian'ny taona maro ny fampandrosoana, dia variana Anebon Metal tsena mora ho an'ny orinasa isan-karazany farany ambony fametrahana mazava tsara metaly manohana faritra, toy ny Auto Industry, Medical Fitaovana, Orinasa Fitaovana, Fanorenana milina, Aviation Fitaovana, Industrial Connector sy Serasera Fitaovana. Mandritra izany fotoana izany, dia mazoto hiara-miasa amin'ny mpanjifa ny R & D, dia hanampy ho fanatsarana bebe kokoa, mba hahazoana antoka ny mpanjifa ny tombom-barotra.
Nandritra ny orinasa mpamokatra entana rafitra rehetra, Anebon Metal hifantoka amin'ny toetra, dia mikarakara ny mpanjifa sy ny vokatra fepetra toetra manokana. Dia nanangana ny fanaraha-maso sy mampihatra araka drafitra azy eo amin'ny dingana. Raha ny mahazatra dia mampiasa fitaovana kalitao: APQP, CP, MSA, SPC, CPK, PPAP, KAIZEN & PDCA.
Tsidiho ny Customer tany Alemaina
Mpanjifa avy any Eoropa nitsidika Anebon
Adiresy: Rongtong Industrial Park,
aluminium fanariana, nanarato teny amin'ny faritra , aluminium maty fanariana , maty fanariana faritra , aluminium maty niampatra, aluminium maty mandatsaka faritra ,